नेपाल कारखाना श्रमिक सङ्घ कास्कीको अध्यक्षमा पन्थी सरकारले नै श्रमिकको तलब र ज्याला तोक्नुपर्छ – कुँवर
पोखरा, २६ फागुन। नेपाल कारखाना श्रमिक सङ्घ कास्कीको शनिबार सम्पन्न छैठौ जिल्ला अधिवेशनले टेकनाथ पन्थीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ। समितिको उपाध्यक्षमा सरस्वती आचार्य, सचिवमा सुरेन्द्र श्रेष्ठ, सहसचिवमा सुरेश पौडेल, कोषाध्यक्षमा कलाकुमारी पाठक, सदस्यहरुमा ज्ञानबहादुर पुन, लीला अधिकारी, खेमबहादुर खोजमगर, बाबुराम आचार्य, सुनिता सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ र प्रेमबहादुर गुरुङ रहेका छन्। समितिको पहिलो बैठकले एक उपाध्यक्षसहित दुर्इ सदस्य थप… पुरा पढौ
पोखरामा चौथो क्षेत्रीय पुष्प व्यापार मेला सुरु
पोखरा, २५ फागुन। फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन (फान) नेपाल जिल्ला कार्यसमिति कास्कीको आयोजनामा पोखराको सभागृहमा शुक्रबारदेखि चौथो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय पुष्प व्यापार मेला सुरु भएको छ। फागुन २९ गतेसम्म चल्ने मेलामा विभिन्न तीन सय प्रजातिका फूल प्रदर्शनी तथा बिक्रीका लागि राखिएका छन्। आयोजकका अनुसार मेलामा १० रूपैयाँदेखि २० हजार रूपैयाँसम्मका सजिसजाउ गरिएका विभिन्न प्रजातिका फूल राखिएका छन्। मेलाको २० हजारले अवलोकन गर्ने र… पुरा पढौ
मिलिजुली महिला बचत तथा ऋण सहकारीको १३ औं साधारणसभा सम्पन्न
पोखरा, २५ फागुन। कास्कीको याङ्जाकोट थुमाको डाँडामा रहेको मिलीजुली महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १३ औं साधारणसभा सम्पन्न भएको छ। महिलाद्वारा नै स्थापना गरेको सहकारीले १०३ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा विविध जनचेतना एवं जागरणमलक कार्यक्रम गरी मनाएको हो। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका इलाका शाखा कार्यालय प्रमुख पवन यादवले महिलाहरू नै सङ्गठित भएर महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले… पुरा पढौ
फुटपाथ व्यापारीको आन्दोलन स्थगित कृषि सामग्री संस्थानको जग्गामा स्थानान्तरण
पोखरा, १६ फागुन। कास्की जिल्ला प्रशासनले फुटपाथबाट हटाएपछि आन्दोलनरत सडकका व्यापारीको आन्दोलन स्थगित भएको छ। नेकपा-माओवादीआवद्ध राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासङ्घले बुधबार पोखरा-९ बसपार्कस्थित सहारा क्लब अगाडिको जग्गाका लागि सम्झौता गरेपछि उनीहरूको आन्दोलन स्थगित भएको हो। सो जग्गाका स्वामित्व लिएका नन्द तिवारीसँग महासङ्घले नयाँ सम्झौता गरेको छ। तिवारीले स्वामित्व लिएको करिब सात रोपनी जग्गाका करिब चार सय स्टल अट्ने अनुमान गरिएको… पुरा पढौ
एकै दिन तीन टोलीद्वारा पोखराको बजार अनुगमन
पोखरा, १३ फागुन। जिल्ला अनुगमन समिति कास्कीले पोखरामा आइतबार बजार अनुगमन गरेको छ। तीन वटा समूहले पोखराका मुख्य शहरी क्षेत्रमा आइतबार एउटै समयमा बजार अनुगमन गरेको हो। तीन वटा टोलीले एकै दिन एउटै समयमा यसरी बजार अनुगमन गरेको पोखरामा पहिलो पटक हो। यसअघि कहिलेकाहीँ एउटा टोलिले मात्र बजार अनुगमन गर्दै आएको थियो। ‘एकै दिन एउटै समयमा बजार अनुगमन गर्दा बढि… पुरा पढौ
विशाल सिमेन्टको बिक्री वितरण पोखरामा पनि
पोखरा, १३ फागुन। नवउद्यमीहरूको व्यापारिक संस्था विशाल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालिको उत्पादन विशाल सिमेन्टको पोखरामा पनि बिक्री वितरण सुरु गरिने भएको छ। पोखरामा प्रालिका कार्यकारी निर्देशक जयन्द्र चुडालले नेपालीहरूको आफ्नै उत्पादन विशाल सिमेन्टको बिक्री वितरण पोखरामा पनि चाँडै सुरु गरिने भएकोले बजार प्रबर्द्धनमा सहयोगको लागि पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी निर्माण सामग्री व्यवसाय सङ्घ आबद्ध सदस्यहरूलाई अनुरोध गरेका छन्। सिमेन्ट उत्पादनको क्षेत्रमा… पुरा पढौ
सिटी डेभलपमेण्ट बैड्ढको शेयर सूचिकृत
पोखरा, ११ फागुन। सिटी डेभलपमेण्ट बैड्ढले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को मुनाफाबाट नेपाल राष्ट्रबैड्ढले स्वीकृत तथा साधारणसभाले पारित गरि वितरण गरेको प्रतिशेयर अड्ढति तथा चुक्ता मूल्य रु. १००।- दरको तीन लाख ३७ हजार तीन सय २४ कित्ता बोनस शेयर धितोपत्र ऐन, २०६३ बमोजिम नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा कारोबार हुनेगरी सूचिकृत भएको छ। यसअघि सूचिकृत २२ लाख कित्ता र आ.व. २०६८/०६९ मा… पुरा पढौ
पोखरामा क्यान इन्फोटेक मेला सुरु सूचना प्रविधिको पहुँचलाई दुर्गम बस्तीसम्म पुर्‍याउनर्ुपर्छ : भट्टरर्ाई
पोखरा, १० फागुन । क्यान कास्कीको आयोजनामा पोखरामा बिहीबारदेखि चौथो पोखरा क्यान इन्फोटेक मेलाको सुरु भएको छ। पोखरा सभागृहमा आयोजित मेला फागुन १३ गतेसम्म चल्ने छ। विकसित सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले सो मेला आयोजना गरिएको हो। मेलामा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित ८० वटा स्टल रहेका छन्। मेला ५० हजार दर्शकले अवलोकन गर्ने अपेक्षा आयोजकको छ। सूचना प्रविधिको… पुरा पढौ